छोराछोरीको अनिद्रा को प्लट। कसरी अनिद्रा सामना गर्न?
शब्द मा आमाबाबु र एउटा सानो चमत्कार को लामो-प्रतीक्षा जन्म हजुरबा हजुरआमाले को आनन्द राख्नु छैन। र यहाँ उहाँले त सानो र कता हो कता हृदयस्पर्शी, घर छ। प्यारा आनन्द को यो अनमोल सानो बन्डल अब आफ्नो सबै ध्यान लाग्न हुनेछ।
यो पनि कुरा छ जो छैन बच्चा के समस्या उत्पन्न हुन सक्छ जस्तो थियो? खुवाउन समयमा, परिवर्तन डायपर - र यो दिनको लागि सुत्न मीठो हुनेछ, र आमाबाबुले उहाँलाई सधैं पराउँछु र आनन्दित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ठूलो गल्ती निहित। यो बच्चा पहिलो छैन गर्नेहरूलाई आमा यो साँचो होइन भनेर थाहा।
यस नवजात अझै आफ्नो चिन्ता, र कठिनाई लागि कारण कुरा गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई। खुवाउनुभयो एक pipsqueak, डायपर सफा र सुक्खा जस्तै, घर मा कुनै उज्ज्वल प्रकाश, टिभी र कम्प्युटर, पूर्ण मौन बन्द छ, र उहाँले सुतेको थियो। उहाँले रो थियो किन बच्चा किन अनिद्रा अनुमान गर्न प्रयास र उहाँले मन थिएन। ध्वनि निद्रामा बच्चा - उहाँले स्वस्थ र सामान्य विकास हो भनेर चिन्ह हो।
बाल रो कहिलेकाहीं निराश र आतंक गर्न अनुभवहीन आमाबाबुले ल्याउँछ। एउटा कारण धेरै हुन सक्छ। मांसल भोक, उहाँले धेरै त्यस्ता साना बच्चाहरु मामला छ दुखेको पेट, थियो, यो conversely, चिसो र ज्वरो, तातो छ, वा। संशोधित रो, सफाया लागि सबै कारण, यो crumbs अस्पताल मा जाँच गरियो। डाक्टर बच्चा अनुसार आफ्नो उमेर, कुनै विचलन को विकास संग, सामान्यतया विकास छ कि राय दिनुभयो। पनि आधुनिक उपकरण संग, चिकित्सा सधैं आमाबाबुको सबै प्रश्न, तिनीहरूलाई मदत गर्न जवाफ सक्दैन। वयस्क सबै प्रयत्न गरे तापनि मेरो बच्चा अझै सुतिरहेको वा धेरै uneasily सुतिरहेको छैन।
प्रतिरोध गर्न असमर्थ र babble मूल बौना, आफ्नो हास्यास्पद grimaces, अनन्त "दिन" र pricked "किन।" तर यी मानिसहरू मात्र खराब आँखा गर्न susceptible छन्। कहिलेकाहीं, पनि घनिष्ठ व्यक्ति, जस्तै एउटा दूत प्रशंसा, आमा-nighter प्रदान गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीं, पनि कसैले पछि तिनीहरूले मन, बच्चालाई सो र सबै रात कराए गर्न सक्दैन। साधारण मान्छे भन्न - jinxed। Skeptics यो विश्वास छैन, तर यस्तो अवस्थामा भएको गर्नेहरूलाई, त्यहाँ एक चमत्कारी ईश्वरीय हस्तक्षेप छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
किन हजुरबा हजुरआमाले संकेत गर्न आवश्यक छ?
एक बच्चाहरु को जन्म पछि छाती धेरै कमजोर छ। आमा संग शारीरिक जडान अवरोध यो, न्यानो शान्त, सुरक्षित थियो जहाँ गर्भमा, जीवनको लागि समायोजन गर्न गाह्रो पाता कारण, खान चाहेनन्। त्यसैले धेरै grudnichki अक्सर बिरामी, तिनीहरूले सजिलै भावनात्मक चोट गर्न सकिन्छ। परिवारमा एक जवान बच्चा गर्नेहरूलाई, समस्या ज्ञात। यस मामला मा, उल्लेख "हजुरआमा।" त्यसैले सेतो witches, परम्परागत चिकित्सकहरु, चिकित्सकहरु भनिन्छ।
र तिनीहरूले सामान्यतया सबै उपचार जायदाद जानिन्छ। , संयुक्त कि सानो बच्चा र दुष्ट आँखा, र डर दाबी छोराछोरीको उपचार मा आफ्नो जादू प्रयोग गर्ने हजुरआमा-बाबा। सानो प्राणीहरू को समस्याका - दुवै अन्ततः अनिद्रा, restlessness, चिन्ता, र समस्या एउटा कारण कारण नेतृत्व। एउटै जादुई अनुष्ठान सबै अवस्थामा उपयुक्त छ, र डरा गर्दा मद्दत गर्छ, र दुष्ट आँखा। यो एक दिन बच्चा naprygalis, उहाँले उत्साहित छ र शान्त गर्न सक्दैन बारेमा, चलिरहेको, धेरै प्रभावहरू प्राप्त गर्ने हुन्छ। tots मा अक्सर तिनीहरूले दिन र रात भ्रममा कि हुन्छ।
कसरी अनिद्रा सामना गर्न घरमा? यो र थप छलफल गरिनेछ।
दुष्ट आँखा संग विधि शान्त grudnichka
डर र दुष्ट आँखा को उपचार को लागि आवश्यक lekarke उल्लेख छैन। तपाईं अनिद्रा देखि प्लट र सही समयमा यो उच्चारण गर्न सिक्न सक्छन्। केही परिवार मा, जस्तै संस्कार तल पुस्ता देखि पुस्ता गर्न, हजुरआमा देखि आमा पास।
उदाहरणका लागि, सुत्न सबै भन्दा प्रसिद्ध षडयंत्र। टुकडा केही अज्ञात कारणले रुन्छिन् भने, तपाईं कचौरा गर्न आवश्यक त्यसपछि, भन्दै "सुरक्षित गर्नुहोस् र सुरक्षित", केही पानी यो बच्चा धुन प्रभुको प्रार्थना पढ्ने बेला, सफा चम्मच र काँटाहरू "धुन"। हटाउन उनको nightgown र ओढ्ने को हेम। सबै छ। अचम्मको कुरा, यस्तो सरल कार्यहरू सधैं सकारात्मक परिणाम ल्याउन। कुनै पनि मामला मा, बच्चा धोइदिनुभएर बाँया पछि पानी शौचालय प्रयोग गर्न अनुमति।
पढाइ षडयंत्र को नियम
पछि बदमासी र ठट्टा वरिपरि चलिरहेको एक दिन निदाउँछन् छैन भने, त्यहाँ अनिद्रा को एक विशेष षड्यन्त्र हुनेछ। यो कालो जादू लागू गर्दैन रूपमा उहाँले कुनै पनि हानि गरेन। यो जस्तो देखिने अर्थहीन वाक्यांश पढेपछि चटपटाउनु तल calms उहाँले बेडरूम, बाबा Yaga, हड्डी को थैला, र अन्य शानदार मान्छे को कुना मा कुनै पनि डरलाग्दो राक्षस को डर थियो अवलोकन गरिएको छ। उहाँले चुपचाप सोता, कम अक्सर अप wakes। तर काम गर्न अनिद्रा देखि षडयंत्र, तपाईं स्पष्ट थाहा र सही गर्न सबै कार्यहरू र परिवर्तन गर्ने वा एकल उलटफेर बिना शब्दहरू उच्चारण गर्न आवश्यक छ।
भवदीय, र प्रक्रियामा प्रार्थना यसको krovinochku निको पार्न इच्छा ध्यान केन्द्रित गर्न भने, षड्यन्त्र, उपयोगी हुन बाध्य छ त्यसैले यो, हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छन्। विचार राम्रो हुनुपर्छ।
एक बच्चा चर्च मा बप्तिस्मा छ भने, प्रभु गर्न त प्रार्थना, चाँडै सुने गरिनेछ। त्यसैले यो गाढा सेना बाट बच्चा रक्षा गर्न सजिलो छ। धेरै विशेष बप्तिस्मा गर्न चर्च छोराछोरी छन्, र तुरुन्तै सकारात्मक नतिजा हेर्नुहोस्।
अनिद्रा को रीतिथितिहरू बाहिर कुनै पनि समयमा, चन्द्र को अवधि बिना लगे गर्न सकिन्छ।
अनिद्रा, एक बच्चा कुरा डराएका यदि हुन सक्छ। त्यसपछि एक अन्डा ल्याइने को अनुष्ठान पूरा। यहाँ यो खातामा कारक धेरै लिन आवश्यक छ। त्यसैले, यो भने यस्तो समारोह हुनेछ ज्ञान व्यक्ति राम्रो हुनेछ।
बच्चा आमा को अपरिचित र अबोध्य शब्दहरू उच्चारण गर्न सुरु भन्ने तथ्यलाई गर्न सुत्नेसमय कथाहरू देखि अप्रत्याशित संक्रमण भयभीत गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिइएको, यो बच्चा तयार गर्न आवश्यक छ। rocking गर्दा माथि बच्चाहरु एक हिज्जे कविता भन्नु। बच्चा भयभीत छैन ताकि जादू शब्दहरू, एक लेकानेखुसीगर्छ मा पढ्न सकिन्छ।
हामी कसरी बप्तिस्मा गर्नुपर्छ
छोराछोरीको अनिद्रा को लोकप्रिय जायदाद यसो crumbs आवश्यक पार। यसलाई कुनै पनि अनुष्ठान मा चुकी छ। ताकि अवस्था, wrongly क्रूसमा लगाएको द्वारा worsen छैन यो सही गर्न आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, धेरै छैन थाहा छैन। हामी बल र परमेश्वरको सुरक्षा दिन अनुरोध भने, क्रूसमा आफु वा बच्चा चिन्ह बनाउने। बप्तिस्मा तीन औंलाहरु सँगै जोडेको, र सुरुमा यसलाई मा निधारमा आफ्नो औंलाहरु राख्न आवश्यक छ, त्यसपछि हात आफ्नो पेट मा, त्यसपछि दायाँ र बायाँ काँध मा छ।
जन्म देखि, हामी आकाश सहायक खतराबाट जोगाउँछ, हामीलाई पालन गर्ने दिइन्छ। चर्च मा बप्तिस्मा थप र संरक्षक सेन्ट बन्नेछ। यो खातामा शब्दहरू zagovornyh उच्चारण, बप्तिस्मा वा unbaptized बच्चा लिन महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ एक बच्चा छ जहाँ घर, यो पवित्र पानी हुन छ। यो बलियो कि विश्वास छ - इपिफ्यानी Name। पिउन र जादू संस्कार मा प्रयोग गर्न सकिन्छ पवित्र पानी। कहिलेकाहीं तपाईंले केही रातका लागि दोहोर्याउनु पर्छ यो काम गर्न एक हिज्जे। आफ्नो प्रार्थनाको हात द्वारा लिखित आकर्षण लुकाउन धेरै मनमोहक मा नांद वा खाट नजिकै।
बच्चा अनिद्रा को षड्यन्त्र
यो अनुष्ठान बच्चाको लागि प्रयोग गरिन्छ गिर सक्छ सुतेको सकेसम्म, र केवल उज्ज्वल र मनोरंजक सपना देखे। यस षडयंत्र बिस्तारै बच्चा को अनुहार मा बाहिर समयमा हुनुपर्छ र निम्न शब्दहरू कविता भन्नु: "स्वर्गदूतहरू, स्वर्गदूतहरू, तपाईं रक्षक तपाईं आकाश को योद्धाहरू छन्। परमेश्वरको टाउको नोकरलाई तिमीहरू आउन (बच्चाको नाम संकेत), आफ्नो दाहिने खडा आफ्नो बाँया मा खडा, परमेश्वरको सेवक रक्षा (नाम दोहोर्याइएको छ)। यसलाई देखि बन्द distilled दुष्टात्मा, दुष्ट को एक किसिम ले, ईर्ष्या मान्छे देखि रक्षा। उहाँलाई सुतेको छिटो गिरावट गरौं, र निद्रामा राम्रो र उज्ज्वल हुनेछ। पिता र पुत्रको र पवित्र आत्माको नाउँमा। आमिन! "
प्रार्थना सुत्नेसमय (Troparions)
धेरै सुत्न जा र लामो समय सुत्न सक्दैन लागि कताई अघि उनको बच्चा, यो सुत्नेसमय विशेष प्रार्थना अघि पढ्न सिफारिस गरिएको छ कि आमा याद भने।
निम्नानुसार उनको शब्द हो: "हामीलाई कृपा छ, हे प्रभु, हामीलाई कृपा छ; पाप गर्ने सबैलाई, को लेडी को प्रार्थना पापी ल्याउन, हामीलाई कृपा छ। तपाईं महिमा, प्रभु, हामीलाई कृपा छ, तपाईं को लागि मात्र आशा; हामीलाई क्रोधित हुन छैन, contemptuously हाम्रो शत्रुहरूलाई श्रेय हाम्रो iniquities, सम्झना। तपाईं के तपाईं लागि कल तर्फबाट, तपाईंको हातले गरिन्छ, हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, र हामी आफ्नो मानिसहरू छन्। र अब, अनमोल भर्जिन मरियम, कृपया ढोका हाम्रो लागि तपाईंको कृपा खोल्न, तपाईं गर्न तत्पर, हामीलाई नष्ट गर्न दिनुहोस्, तर हो के तपाईं सबै मसीहीहरूको मुक्ति हो किनभने, समस्या बाहिर हामीलाई बचाउनुहुनेछ। आमिन! "- पछिल्लो शब्द बारम्बार गर्नुपर्छ 12 पटक।
अनिद्रा लागि मुख्य प्रार्थना
यो सुत्नेसमय मा साँझ अपनाउनु नियम बनाउन। ओछ्यानमा राख्दै खाने, लुगा धुने, - - सबै प्रक्रियाहरु पछि मह संग बच्चा चीनी पानी दिनुहोस्। यदि यो गरेर पानी र राम्रो गुणस्तर मह पवित्र गरिनेछ राम्रो। कि अघि पेय भन्दा तपाईं राम्ररी पढ्न आफ्नो गेट, "बार्कर, हजुरबुबा toptun, आफ्नो भाग shouter capon अन्तर्गत एक निद्रामा डाली usypkoyu, लिन आराम गर्न आवश्यक छ। Отче наш » . आमिन! हाम्रो पिता "तीन पटक पढेपछि बच्चाको खुट्टा राख्न पानी बाँकी"। "
त्यहाँ छोराछोरीको अनिद्रा अर्को रोचक षड्यन्त्र हो। शब्दहरू संग बदमास बच्चा धुने: "बिहान र साँझ डन डन! मा दिन रात मा आराम र निद्रा, गरौं! "एक तौलिया, र उनको आमाको पोशाक को हेम खाली।
शिशुहरू लागि सुत्न षडयन्त्र, "सुत्न, बच्चा जानुहोस्। यस रुखको ठूटो ड्राई, बिरामी रूख देखि एक शाखा को कुना मा। Restlessness यो मुद्दा मा तपाईं पठाउन हुनेछ। शाखा एक सानो छोरा (छोरी), मेरो विश्राममा ग्रस्त छ। आमिन! "
ओछ्यानमा जानुअघि पनि पढ्न: "प्रभु येशू ख्रीष्ट, पुत्र परमेश्वरको, आशीर्वाद पवित्र, तिम्रो पवित्र क्रस शक्ति मेरो बच्चा सुरक्षित।" धेरै महिलाहरु द्वारा साबित रूपमा, अनिद्रा मदतको लागि जमीन जायदाद महंगा औषधी भन्दा धेरै राम्रो छ।
अब तपाईं कसरी घर मा अनिद्रा सामना गर्न थाहा छ। स्वास्थ्य र तपाईं र तपाईंको बच्चाहरु को लागि शुभ रात्री गरेको निद्रामा!
मिथक र प्राचीन मिश्र को परभक्षी। मिश्रको मिथक: नायक र आफ्नो विवरण
Rune आहार - व्यञ्जनहरु र समीक्षा। स्कैंडिनेवियाई Runes वजन मदत गर्न!
के ELSA नाम गर्छ?
विशेषताहरु र नाम एलिसा को महत्त्व
उत्कृष्ट चरा Sirin - भ्रम वा वास्तविकता?
इन्टरनेट एक्सप्लोरर गुण: के र किन?
चक्कु zasapozhny: इतिहास, वर्णन, सुविधाहरू लगाउने
के पढ्दैछ र यो के हो?
7-सेटर कारहरु, 7-स्थानीय कारहरु (फोटो) को अंक। कसरी 7-सेटर कार छनौट गर्ने?
पिज्जाको लागि Bezdorozhevoe आटा: नुस्खा
शब्दांशहरू मा शब्द कसरी विभाजन गर्ने? खुला र बन्द शब्दांशहरू। को कागजातसार स्थानान्तरण
फ्लोरोसेंट लैंपका लागि स्टार्टर: मार्किंग र उपकरण। फ्लोरोसेंट रोशनीका लागि स्टार्टर कसरी छनौट गर्ने?
"नोकिया" 206: विशेषताहरु र peculiarities
दुनिया मा अमीर मान्छे - कार्लोस स्लिम